Kutarisa pachikwata chakazara nemazai emhashu kana iwe uchiongorora maitiro ako ezuva nezuva ekubhururuka.
Ndakatarisa ruoko rwekutanga kuti kubereka kunogona kukurumidza sei kuburitsa kwako kubudirira. Mushure mekugara mune imwe gango rega rega rekuvhara kutya ini ndakafunga nzira yekusimudzira maitiro angu kuwedzera bhugi rangu rekutengesa, kuwedzera zvandinowana mabhurogi uye nekubatsira tani yevanhu mukugadzisa.
2 Usavhiringidze Chigadzirwa Nekuita
6 4- Batch Mabasa Ako
10 8- Kurara kwemaawa 8 usiku
nyora uye uzviparidze zvinyorwa zveBoxNUMX e-boeke
kuparidzira pamusoro pe5,000 blogplasings pamusoro pebasa rangu rokugadzira
vanoita seve pose pose
126 byt-e-boeke kuAmazon.
Mumwe anotungamirira mukati; zvishandiso hazvingakuiti kuti uite uye iwe pachako. Inoshandisa mudziyo (waka iwe) inosarudza huwandu hwavo hwekubereka nekufamba muzviito zvinobudirira zuva rega rega. Zvimwe zvishandiso zvinogona kuwedzera kukura kwako zvakanaka asi mudzi wezvinhu zvose zvinobudirira zvinobva mukati memafungiro ako.
Tora iyo kubva kune mukomana akanyora uye akazvinyora-akaburitsa 6,000 izwi eBook zuva rega rega panguva ye3 mwedzi yakatambanudzwa makore mashoma apfuura. Zvese zvaunoda kuve hyper inobereka inogara mupfungwa dzako, iko zvino. Zviri kwauri kuti usunungure chikara chinobereka.
Usavhiringidze Chigadzirwa Nekuita
Wana pachena ruit musiyano pakati pekubudirira uye basa. Nhamba yezviito zvakapera hazvirevi chinhu. Kubudirira shure kwekugadzira kwako kunoreva zvose.
Tarisa paneel pfungwa yekuroveraging. Iva nekubudirira kusvika kuvanhu vakawanda vanofarira sezvinobvira.
Unokunda hapana menduru dzekunyora uye kuburitsa 5 yevaenzi mazuva ese kana iyo mhando yekushambadza isina kunaka. Iwe uri nani pane kunyora uye kushambadza 1-2 yakakwirira mhando, yakanangwa, traffic-kutyaira yevashanyi mitezo.
Funga kubudirira pamusoro pevhutu rakachena kuva bhero rinobudirira.
Ini ndakanyora 100 e-boeke mumwedzi ye3 nekuti pfungwa dzangu hadzina kukanganiswa nekufunganya nezvekutsvaira imwe you-eBook kuburikidza nemhirizhonga yekusimudzira. Ini akanyora nokuda kwemufaro wekunyora. Kunyatsodzivirirwa kubva pamigumisiro panguva iyi yekunyora ndakatora eBook zuva rega rega kwemwedzi ye3.
Zviri nyore kugadzira kana met behulp van ‘n duik nezvibereko zvekugadzirwa kwako.
gara muimba yakanyarara
Mumakore akaonda ndakapedza nguva shomanana pakuvandudza munhu. Kuburitsa kwangu kuburitsa kwakanga kusiripo nokuti pfungwa dzangu dzakanga dzichitya nekutya, kushaiwa uye kuderedza. Kushanda mupfungwa dzangu zuva rega rega kwakandibatsira kuona, kutarisana, kubvuma uye kusunungura maitiro ekudzivirira akandibata zvakare.
Ndaida kugovera zvishoma zvandaiita zuva nezuva zvandinoita kuti ndikubatsire kuva dynamo inobereka.
Tarisa-ruit kufema kunopinda mukati nokunze kwemhino dzako. Apo kunyatsoteerera kwako kunopera kure nemashoko ako okufema chinhu chaunofunga-pfungwa, kunzwa kana chimwe chinhu kunze kwako – uye zvinyatsofambisa pfungwa dzako kudzokera pakufema kwako.
Fungisisa nguva dzose nokuda kwekutuka kwakasimba kwekubhururuka chokwadi serum. Iwe unogona kupika kuti iwe unoda kuva unobereka zvinoshamisa asi kana zvakanyanyisa-zvaunotenda zvisinganzwisisiki zvinoreva zvimwe zvakashata zvako zvinokunda nguva dzose. Zvichida kusvikira is ‘n unotya kutya-gebaseerde kuvhara kutenda kunopera. Kufungisisa ndicho chinhu chakakosha chekutora kutenda chero kupi zvayo.
Ruzivo: Rwendo rweKumutswa: Bhuku reMeditator
Kuzviona is sekubudirira kunowedzera kubudirira kwako nokuti kufunga kwako kunotarisa zvakaitika muupenyu hwako.
Dzorera skakel kuti inotonhora. Hora pasi pemvura yekutsvaga julle 30 kusvika ku60 sekondes.
Kunyange zvakadaro hauna kugutsikana nehodha yewadha bietjie? Teerera kune mumwe mudzidzisi akakurumbira wenyika uye nyanzvi yakaisvonaka Tony Robbins anotaura pamusoro pei simba remvura inotonhorera.
Nyora zviito zvako zvekugadzira mabhuku-ruit imwe papepa.
swamme nezvezviito zvinoshandisa kuvepo kwako semuenzi achitumira
tora runyararo kana iwe ukazviwana uchigadziriswa nemabasa uye met gebruik vanabatsiri
4- Batch Mabasa Ako
Shanda mumaminetsi emaminetsi e50. Ipa basa rakananga kune imwe nguva ye50.
1ste 50 joernaal – nyora blog yako inotevera
2de 50 maminitsi ekugeza – ramba uchinyorera bhokisi rako rinotevera
3de 50 mutsara wemaminiti – rondedzera-ruit 5 top blogs kubva munharaunda yako
4de 50 mutsara wemaminiti – shingai shamwari neveveri mumagariro evanhu
5de 50 mutsara wemaminiti – nyora muteveri wako-sampioen
Iva nehasha newaini yako kuti uwedzere kubudirira kwako. Kana nguva yapera uye iwe usati wapedza basa rako raunenge uchida kungoenderera mberi kune rimwe rinotevera uye dzokera kubasa rako rinoshanda zuva rinotevera. Isai muenzaniso wekugadzira mukati memazuva ezvigadziro kuti uwedzere kubereka kwako.
‘N Mutsva-blogger inogona kushandisa imwe nguva yakakosha-ruit mamwe mabloggi se sosiale media masaiti kuti agovere uye ataure zvemukati zvemukati.
Sezvo nyeredzi yavo ichivhenekera uye vazhinji vanowanikwa mashomanana emashure vanopinda mukati, nguva iyoyo ingadai iri nani kunyatsoshandiswa kunyora uye kubudisa vatambi vhesi pamasimba ekublogi kubva kunzvimbo yavo.
Tsvaga imba yakanyarara. Kana kuti ipai mahwindo maviri-kutinhira mahwindo.
Nyora 500 kumashoko 1000 zuva nezuva kuti uite.
Vhura chigwaro cheShoko. Nyora. Tora chibvumirano-mos mokunge uchinge warova chinangwa chezuva nezuva.
sora chigwaro cheShoko sampioen mekurova chinangwa chako kukudziridza tsika yekudzivisa kubva pakunyora kwako
Aanbevole leeswerk: Kunyora Kwaungaita 10.000 Mashoko muZuva Rimwechete
8- Kurara kwemaawa 8 usiku
Chenjerera muviri wako kuti uwedzere kutarisana nepamusoro uye pasi pemasikati. Kana iwe uine simba uye uine simba iwe unogona kuramba uine zvibereko pasinei nekusangana nezvipingamupinyi zvaunoda kuparadza kana kuvhara
kuderedza kudya kwefefeine usati warara kune kurira kweanorara husiku
Uitkontrakteer zvinhu zvako blogveldtog kuti urambe uchibereka.
Svondo rapera blog yangu yakaparara kwemaawa anopfuura 24.
Panzvimbo yekuedza kuziva kuti chii chakakanganisika ndakaendesa tekiti kune davi rekubatsira uye ndakatsanangurira mutekisi webhu yangu kumamiriro ezvinhu.
KuBuena Vista, Costa Rica.
Nenguva yakajeka, kudzidzira kwemaminitsi mashoma 30 zuva nezuva kunofambisa kubuda kwemavara nemuviri wako. Sezvo kubuda uku kunowedzera iwe unoparadza zvigadzirwa zvekugadzira, zvichikuita iwe unobereka, dynamo in wakawanda.
Pedza 30 maminetsi kurovedza muviri zuva nezuva. Famba, draf, mhanya kana kuita mutambo wako waunofarira. Ingotaura nachiremba wako kana usati warovedza muviri munguva.
Contents0.1 "Hey Jerry, ndingaita sei mari yekugadzira mabhuku sauri?"0.2 Mienzaniso yehupenyu hwechokwadi Heano mamwe
Contents0.1 "Hej Jerry, ndingaita sei mari yekugadzira mabhuku sauri?"0.2 Mienzaniso yehupenyu hwechokwadi Heano mamwe
Contents0.1 "Хей Джери, ndingaita sei mari yekugadzira mabhuku sauri?"0.2 Mienzaniso yehupenyu hwechokwadi Heano mamwe
Contents0.1 "Hola Jerry, ndingaita sei mari yekugadzira mabhuku sauri?"0.2 Mienzaniso yehupenyu hwechokwadi Heano mamwe
Hapana chinonzwa chinogumbura kupfuura kunzwa sokunge iwe hauwu kuwana chinhu pamagumo ezuva rako rekubhura.